Semalt Expert: How To Rid Of Trojan Botnet
The botnet botnet inopararira kana hutano hwako huri hwechokwadi uye hwakavimbika. Vashandi vanonyatsoziva vanogona kugamuchira zvinyorwa kubva kune vanotumirwa vasingazivikanwi, vanozviita sevasina mhaka uye vanoda kuti iwe upinde mune dzimwe nzvimbo dzekutengesa. Nokuda kweizvi, vanokukumbira kuti unyore pane humwe hukama, husina kuchengeteka. Zvirwere zveTrojan zvinowanzopararira kuburikidza nezvinhu izvi zvinoshungurudza kana hukama. Izvo zvine mabhoti ekugadzira anowanikwa panzvimbo yako uye anoita kuti iite seZombies. Jack Miller, uyo Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anotaura kuti dzakawanda zvezviitiko zveTrojan botnet zvinorondedzerwa kana maitiro acho akabatanidzwa nekodzero chaiyo kana Trojan horse kana apo code yakaipa inopinda mumakombiyuta uye chikamu chekuyeuka kwayo - high wattage vape mods kits.
Izvi zvirwere zvinopararira sei?
Kungofanana nedzimwe hurongwa, Trojan botnets inopararira nekusvibisa huwandu hwemakombiyuta epakombiyuta. Aya mapurogiramu anova chikamu chekombiyuta yako uye haakuregi iwe uzive kuti vari kuita zviito mamwe mabasa asingabvumirwi nemutemo. Pamusoro pezvikamu zvakawanda, iyo Trojan botnets uye zvirwere zvinokonzera masangano ekugadzirisa mufoni yako uye inokanganisa kushanda kwayo nekushanda.
Zvinosuruvarisa, hapana nzira yekudzivisa kuuya kweTrojan botnets uye mamwe mabhoti, asi iwe unogona kuvabvisa kubva kombiyuta yako nenzira shanu dzakasiyana .
Tsanangudzo №1: Shandisa Autoruns
Nenguva isipi, mamwe mapurogiramu uye zvigadzirwa zvinokubvumira kuti udzivise hutachiona hweTrojan muhukuru.Tinokukurudzira kuti ushandise Sysinternals kana Autoruns.Zvose izvi zvirongwa zvakanaka kwazvo uye zviri nyore kuisa. iyo yakagadzirirwa, haufaniri kukanganwa kuvabatisa nekukurumidza sezvinobvira.Iyi purogiramu inonyora yose yeTrojan botnets uye bhodhi dzemaitiro, zvichikubatsira kuti uzvibvise kubva pane yako.
Tsanangudzo №2: Svisa cache
Kana waisa purogiramu iyi, usakanganwa kubvisa cache yako. Rega ini pano ndikuudze kuti vazhinji veTrojan botnets vanosiya zvidimbu zvavo shure kana iwe wabvisa. Saka kubvisa cache kuchaita kuti zvidimbu zvavo zvose zvibviswe zvakare, uye haufaniri kumhanya kune dzimwe nzira dzekuchengetedza.
Tsanangudzo №3: Isai antivirus kana anti-Trojan zvirongwa uye muvandudze
Haufaniri kukanganwa kuisa antivirus uye anti-trojan mapurogiramu uye ugare uchivandudzwa zuva rimwe nerimwe. Aya mapurogiramu achakubatsira kuti ubvise zvose Trojan botnets, uye kuraswa kweDo kunogona kudziviswawo kusvika pamwero mukuru. Iva nechokwadi chekuti wakachengetedza kuchengetedzwa kwako kuchengetedzwa uye haunzwi kunonoka kutenga mabhadharo avo ekubhadharwa kwezvimwe zvinhu uye zvigadzirwa.
Yakakurudzirwa zvirongwa zvehutachiona uye anti-malware
Kaspersky, ESET Nod32, Avast, AVG, BitDefender, Antivir, uye Trend Micro ndiyo mapurogiramu anonyanya kuvimbika anokwanisa kuedza. Zvirongwa zvinorwisa-malware zvinosanganisira Malwarebytes, Emsisoft, uye Zemana. Iwe unogona kutora uye kubvisa chimwe chezvinhu izvi zvehutachiona kana zvinorwisa-malware kuti ubvise matanho eTrojan mumaminitsi mashomanana. Zvose zvinoratidza ruzivo pamusoro pekuti iyo Trojan malware yakaita sei maitiro ako uye haufaniri kukanganwa kushanda scan nguva dzose paunotendesa kombiyuta yako.